Yakavanzika mutemo - VirginiaCare
Iyi Yakavanzika Policy inotsanangura kudzosera-virginity.com ("Saiti") inounganidza, kushandisa, uye kuburitsa Ruzivo Rwako Iwe kana iwe uchishanyira kana kutenga kubva kuSiti.
Kuunganidza Ruzivo rweMunhu
Paunoshanyira Saiti, isu tinotora rumwe ruzivo nezve chako chishandiso, kudyidzana kwako neSiti, neruzivo rwakakosha kugadzirisa zvawakatenga. Isu tinogona zvakare kuunganidza rumwe ruzivo kana iwe ukabata isu kuti titsigire mutengi. Mune ino Yakavanzika Sisitimu, isu tinotaura kune chero ruzivo rwunogona kuratidza zvakasarudzika munhu (kusanganisira iwo ruzivo pazasi) se "Ruzivo rweMunhu". Ona runyorwa pazasi kuti uwane rumwe ruzivo nezve izvo Ruzivo rweMunhu isu rwatinotora uye nei.
Mienzaniso yeRuzivo rweMunhu inounganidzwa: vhezheni yewebhu webhu, IP kero, nguva yenguva, ruzivo rwekuki, ndeapi masayiti kana zvigadzirwa zvaunoona, mazwi ekutsvaga, uye nemabatiro aunoita neSiti.
Chinangwa chekuunganidza: kurodha Saiti nenzira kwayo iwe, uye kuita analytics pane Saiti kushandiswa kugadzirisa yako Saiti.
Kwayakaunganidzwa: Inounganidzwa otomatiki iwe paunosvika kuSiti yedu uchishandisa macokie, mafaera erogi, web beacons, matiki, kana pixels
Kuzivisa kwechinangwa chebhizinesi: yakagovaniswa neprosesa yedu Shopify uye Paypal.
Mienzaniso yeRuzivo rweMunhu inounganidzwa: zita, kubhadharisa kero, kero yekutumira, ruzivo rwekubhadhara (kusanganisira nhamba dzekadhi rechikwereti), kero yeemail, uye nhamba yefoni.
Chinangwa chekuunganidza: kupa zvigadzirwa kana masevhisi kwauri kuti uzadzise chibvumirano chedu, kugadzirisa ruzivo rwako rwekubhadhara, kuronga zvekutumira, uye kukupa mainvoice uye / kana kusimbisa odha, kutaurirana newe, kuongorora mirairo yedu yenjodzi ingangoitika kana kubiridzira, uye kana uri mumutsetse. nezvido zvako zvawakagovana nesu, zvinokupa iwe ruzivo kana kushambadzira zvine chekuita nezvigadzirwa zvedu kana masevhisi.
Kwayakaunganidzwa: akaunganidzwa kubva kwauri.
Rutsigiro rwevatengi ruzivo
Chinangwa chekuunganidza: kupa rutsigiro rwevatengi.
Iyo Saiti haina kuitirwa vanhu vari pasi pezera re . Isu hatironge nemaune Ruzivo rweMunhu kubva kuvana. Kana iwe uri mubereki kana muchengeti uye uchitenda kuti mwana wako akatipa Ruzivo rweMunhu, ndapota taura nesu kukero iripazasi kukumbira kubviswa.
Kugovera Ruzivo rweMunhu
Isu tinogovana Ruzivo Rwako nevevapi vebasa kuti vatibatsire kupa masevhisi edu uye kuzadzisa zvibvumirano zvedu newe, sezvatsanangurwa pamusoro. Semuyenzaniso:
Isu tinoshandisa Shopify kusimbisa chitoro chedu chepamhepo. Iwe unogona kuverenga zvakawanda nezve mashandisiro anoita Shopify Ruzivo rwako Pachedu pano: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Tinogona kugovana Ruzivo Rwako Pachedu kutevedzera inowirirana mitemo nemirau, kupindura kubumbiro, tsvagiridzo yekutsvaga kana chimwe chikumbiro chepamutemo cheruzivo rwatino gamuchira, kana kuchengetedza imwe kodzero yedu.
Sezvatsanangurwa pamusoro apa, isu tinoshandisa Rwako Rwako Ruzivo kukupa iwe yakanangwa kushambadza kana kushambadzira kutaurirana isu tinotenda kuti inogona kukufarira. Semuyenzaniso:
Isu tinoshandisa Google Analytics kutibatsira kunzwisisa mashandisiro anoita vatengi vedu Saiti. Unogona kuverenga zvakawanda nezve mashandisiro anoita Google Ruzivo rwako Pachedu pano: https://policies.google.com/privacy?hl=enIwe unogona zvakare kusarudza-kubuda paGoogle Analytics pano: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Isu tinogovana ruzivo nezve kushandisa kwako Saiti, zvaunotenga, uye kusangana kwako nemashambadziro edu pane mamwe mawebhusaiti nevatinoshamwaridzana navo. Isu tinounganidza uye nekugovana rumwe ruzivo urwu zvakananga kune vatinoshamwaridzana navo, uye mune dzimwe nguva kuburikidza nekushandisa makuki kana humwe hunyanzvi hwakafanana (hwaungabvumire, zvichienderana nenzvimbo yako).
Kuti uwane rumwe ruzivo nezvekuti zvakanangwa kushambadza zvinoshanda sei, unogona kushanyira iyo Network Advertising Initiative's ("NAI") peji redzidzo pa http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.
Unogona kusarudza kushambadzira kwakanangwa ne:
Pamusoro pezvo, unogona kusarudza kubva kune mamwe emasevhisi nekushanyira iyo Dhijitari Kushambadzira Alliance-yekubuda portal pa: http://optout.aboutads.info/.
Uchishandisa Ruzivo rweMunhu
Isu tinoshandisa Rwako ruzivo kugovera masevhisi edu kwauri, ayo anosanganisira: kupa zvigadzirwa zvekutengesa, kugadzirisa kubhadhara, kutumira uye kuzadzikisa odha yako, uye kukuchengeta iwe uchiziva pane zvitsva zvigadzirwa, masevhisi, uye zvinopihwa.
Zvichienderana neGenerali Dziviriro Dhata ("GDPR"), kana iwe uri mugari weEuropean Economic Area ("EEA"), isu tinogadzirisa ruzivo rwako pachako pasi pezvinhu zvinotevera zviri pamutemo:
Iko kuita kwechibvumirano pakati pako neSiti;
Kuteerera zvisungo zvedu zvepamutemo;
Kuita basa rinoitwa mukufarira veruzhinji;
Nezvedu zvatinofarira, izvo zvisingapfuure ako akakosha kodzero uye rusununguko.
Kana iwe ukaisa odha kuburikidza neSiti, isu tinochengeta Rwako Rwako Ruzivo kune edu marekodhi kunze kwekunge uye kusvikira iwe watikumbira kuti tidzime iyi ruzivo. Kuti uwane rumwe ruzivo nezvekodzero yako yekudzima, ndapota ona chikamu che'Kodzero dzako 'pazasi.
Otomatiki kuita sarudzo
Kana iwe uri mugari weEEA, iwe une mvumo yekupokana nekugadziriswa zvichibva pane zvega zvega zvekutora sarudzo (izvo zvinosanganisira kunyora profiles), apo iko kuita kwekutora sarudzo kune mvumo yepamutemo pauri kana neimwe nzira zvakanyanya kukukanganisa.
We [DO / DO NOT] pinda mukutora sarudzo zvizere zvine chekuita nemutemo kana zvimwe zvakakosha uchishandisa data revatengi.
Yedu processor Shopify inoshandisa mashoma otora sarudzo kuita kudzivirira hunyengeri husina mvumo yepamutemo kana neimwe nzira yakakosha pauri.
Sevhisi dzinosanganisira zvinhu zvekugadzirisa kuita sarudzo zvinosanganisira:
Yechinguvana denilist ye IP kero inosanganisirwa nekudzokorora kutadza kutengeserana. Uyu anoramba anoramba achiita mashoma maawa.
Yechinguvana denilist yemakadhi echikwereti ane hukama neakaramba mazita eI kero. Uyu anonyima anoramba aripo kwemazuva mashoma.
Kana iwe uri mugari weEEA, une mvumo yekuwana Ruzivo rweMunhu rwedu rwatinobata pamusoro pako, kuruisa kune sevhisi nyowani, uye kukumbira kuti Ruzivo Rwako rugadziriswe, ruvandudzwe, kana kudzimwa. Kana iwe uchida kushandisa kodzero idzi, ndapota taura nesu kuburikidza neruzivo rwekuonana pazasi
Rwako Rwako Ruzivo rwunotanga kugadziriswa muIreland uye rwuchazotamisirwa kunze kweEurope kunochengeterwa nekuenderera mberi kugadzirisa, kusanganisira kuCanada neUnited States. Kuti uwane rumwe ruzivo nezvekuti kuendesa kwedatha kunoenderana sei neGDPR, ona Shopify's GDPR Whitepaper: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.
Kana iwe uri mugari weCalifornia, une mvumo yekuwana Ruzivo rweMunhu rwatakabata pamusoro pako (inozivikanwawo se'Kodzero Yekuziva '), kuiisa kune sevhisi nyowani, uye kukumbira kuti Rwako Rwako gadziriswe. , kuvandudzwa, kana kudzimwa. Kana iwe uchida kushandisa kodzero idzi, ndapota taura nesu kuburikidza neruzivo rwekuonana pazasi.
Kana iwe uchida kuratidza mumiriri ane mvumo yekuendesa izvi zvikumbiro pachinzvimbo chako, ndapota taura nesu kukero iri pazasi.
Kuki idiki shoma yeruzivo inotorwa mukombuta yako kana chishandiso paunoshanyira Saiti yedu. Isu tinoshandisa akati wandei makuki akasiyana, anosanganisira anoshanda, mashandiro, kushambadza, uye zvemagariro midhiya kana zvemukati makuki. Makuki anoita kuti ruzivo rwako rwekubhurawuza ruve nani nekutendera iyo webhusaiti kuti irangarire zviito zvako uye zvaunofarira (senge kupinda mukati uye kusarudzwa kwedunhu). Izvi zvinoreva kuti haufanire kuisa zvakare ruzivo urwu nguva dzese paunodzokera kune ino saiti kana kutarisa kubva kune rimwe peji kuenda kune rimwe. Cookies zvakare inopa ruzivo rwekuti vanhu vanoshandisa sei webhusaiti, semuenzaniso kana iri nguva yavo yekutanga kushanya kana kana vari ivo vanogara vachishanya.
Isu tinoshandisa anotevera makuki kukwidziridza ruzivo rwako paSiti yedu uye kupa masevhisi edu.
Cookies Zvakakosha Kuti Mashandiro eSitolo
_ab Inoshandiswa maererano nekuwana admin.
_secure_session_id Inoshandiswa zvine chekuita nekutenderera nepamberi pechitoro.
ngoro Inoshandiswa zvine chekuita nekutenga ngoro.
ngoro_sig Inoshandiswa zvine chekuita nekutarisa.
ngoro_ts Inoshandiswa zvine chekuita nekutarisa.
Checkout_token Inoshandiswa zvine chekuita nekutarisa.
chakavanzika Inoshandiswa zvine chekuita nekutarisa.
safe_customer_sig Inoshandiswa maererano nekutenga kwevatengi.
storefront_digest Inoshandiswa maererano nekutenga kwevatengi.
_shopify_u Inoshandiswa kugadziridza ruzivo rweakaundi yevatengi.
Kubika uye Analytics
_kutevera_mvumo Kuchengeta zvido.
_peji_yekugara Teedzera kumhara mapeji
_orig_referrer Teedzera kumhara mapeji
_shopify_sa_p Shopify analytics ine chekuita nekutengesa & kutumira.
_shopify_sa_t Shopify analytics ine chekuita nekutengesa & kutumira.
Iyo yakareba nguva iyo cookie inoramba iri pakombuta yako kana nhare mbozha inoenderana nekuti ndeye "inoramba" kana "musangano" kuki. Session makuki anogara kusvika iwe warega kubhurawuza uye kuramba makuki apfuura kusvikira apera kana kuti abviswa. Mazhinji amakuki atinoshandisa anoramba aripo uye achapera pakati pemaminitsi makumi matatu nemakore maviri kubva musi wavakadhawunirodwawa kune yako kifaa.
Iwe unogona kudzora uye kubata makuki munzira dzakasiyana. Ndokumbirawo kuti urambe uchifunga kuti kubvisa kana kuvharira makuki kunogona kukanganisa maitiro ako evashandisi uye zvikamu zvewebsite yedu zvinogona kunge zvisisakwanisike zvizere.
Mazhinji mabhurawuza anogamuchira otomatiki makuki, asi iwe unogona kusarudza kana kusatambira makuki kuburikidza neako browser mabhurawuza, anowanzo kuwanikwa mune bhurawuza rako "Zvishandiso" kana "Zvaunofarira" menyu. Kuti uwane rumwe ruzivo rwekuti ungachinjisa sei bhurawuza rako marongero kana maitiro ekuvharira, maneja kana kusefa makuki anogona kuwanikwa mune yako browser browser faira kana kuburikidza nemasaiti akadai se www.allaboutcookies.org.
Pamusoro pezvo, ndapota cherekedza kuti kuvharira makuki kunogona kusatadzisa zvachose kugovana kwedu ruzivo nevechitatu mapato sevatinoshamwaridzana navo. Kuti ushandise kodzero dzako kana kusarudza kumwe kushandiswa kweruzivo rwako nemapato aya, ndapota tevera rairo dziri muchikamu che "Behaeveal Advertising" chiri pamusoro.
Ndokumbira utarise kuti nekuti hapana kuenderana kweindasitiri kunzwisiswa kwemabatiro aungaite "Usateedzere" masaini, isu hatichinje yedu yekuunganidza data uye maitiro ekushandisa patinoona chiratidzo chakadai kubva kubhurawuza rako.
Isu tinogona kugadzirisa ino Yakavanzika Policy nguva nenguva kuitira kuratidza, semuenzaniso, shanduko kune edu maitiro kana kune zvimwe zvinoshanda, zviri pamutemo, kana zvikonzero zvekutonga.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve edu zvakavanzika maitiro, kana iwe uine mibvunzo, kana kana iwe uchida kuita chichemo, ndapota taura nesu ne-e-mail pa [email kero] kana netsamba uchishandisa ruzivo rwakapihwa pazasi:
ChiGerman Hunhu Co, Ltd.